မိနျးမဖွဈသူ နန်ဒာလှိုငျနဲ့ ခဏလေးတောငျ မခှဲနိုငျတာ ကွောငျ့ တဈသကျလုံး ရဟနျးဝတျဖို့ စိတျကူးမရှိတော့တဲ့ ဇသေီဟ – XB Media Myanmar
ပရိသတျကွီးရေ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ ခငျပှနျး ဇသေီဟကလညျး မွနျမာနိုငျငံတှငျ အခမျြးသာဆုံး ခရိုနီတဈဦး ဖွဈပါတယျနျော။ နန်ဒာလှိုငျကိုယျတိုငျ ကလညျး အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး အနုပညာလောက ကနေ ရာသကျပနျစှနျ့လှတျပွီးစီးပှားရေးလောကထဲသို့ အခွခေခြဲ့တာ ဖွဈပါတယျ နျော။ ပရိသတျတှကေခဈြသလောကျ ပရိသတျတှအေပျေါတနျဖိုးမထားတာကတော့ စဈကောငျစီအာဏာသိမျးသှားတဲ့ အခြိနျမှာ ဂဃဏန သိခဲ့ရပါတယျနျော။
အစပိုငျးမှာတော့ လငျမယားနှဈယောကျလုံး အဆဲခံခဲ့ရပွီး အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ သူတို့ရဲ့လုပျရကျတှကေိုပွနျလညျအားပေးလာခဲ့ကွပါ တယျနျော။ ဇသေီဟကလညျး ပွညျသူတှေ သူ့အပျေါ အပွဈမမွငျအောငျ အတိုးနှုနျးသကျသာစှာ ပိုကျဆံတှခြေေးပွီး စညျးရုံးခဲ့တာ ဖွဈပါ တယျနျော။
ဇနီးကို ခဈြတတျလှနျးတဲ့ ဇသေီဟက တဈသကျလုံး ဘုနျးကွီးမဝတျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့အကွောငျးကို ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါတှငျ တငျ ထားပါတ ယျနျော။ “ နှဈတိုငျး ရဟနျးခံပါတယျ။ ဝိနညျးနဲ့ မနနေိုငျပဲ ရဟနျးခံတော့ အပွဈတှအေမြားကွီး ရမှာပဲ။ သခြောပါတယျ ရခဲ့ပါတယျ။ သိမျ ဆငျး ပွီး ၅ မိနဈမပွညျ့ခငျမှာထဲက ဝိနညျးအတိုငျး မဖွဈတော့တာ သိပါတယျ။ဒကာမ နန်ဒာကို နှုတျဆကျတယျ။ တှတေ့ော့ ပွုံးမိတယျ။
အနညျးဆုံးတော့ စိတျကို ဘုနျးကွီးစိတျ အပွညျ့မဖွဈသေးဘူးလေ။ ဝိနညျးအတိုငျး မနနေိုငျရငျ ငါရဟနျးမခံသငျ့ဘူးဆိုရငျ ဒီဘဝရော နော ကျ ဘဝတှပေါ ရဟနျးခံဖွဈတော့မယျ မထငျပါ။ ပါရမီဆိုတာ တဈစှနျးတဈစ တဈစကျမှ ရအေိုးကွီးကို ဖွညျ့ရတာပါ။ရစေပျကတကျ လာ တာဖွဈရငျ ရစေိုလာမှာပဲ။ ရမေစိုမှ ကုနျးပျေါတကျမယျ တှေးရငျ စိတျကူးရငျသကျသကျပါပဲ။ ကုနျးပျေါအရငျရောကျပွီးမှ ရခွေောကျ အောငျလုပျရပါမယျ။
သတိထားဖို့က ကြှနျတျောတို့အားလုံး ရထေဲမှာပဲ ရှိနပေါသေးတယျ။ဝိနညျးအတိုငျး မနခေဲ့ဖူးဆိုရငျတောငျ အလုပျကွမျးတှဖွေဈတဲ့ လမျး ခငျးတာ ဆေးသုတျတာ တှေ လုပျပွီးကုသိုလျကောငျးမှု ရှာကွံလုပျခဲ့တာ အမွတျပါပဲ။ကုသိုလျနဲ့ အကုသိုလျ ခြိနျခှငျတငျရငျ ကုသိုလျအငျအား မြားနဖေို့ပဲလိုပါတယျ။ ပါရမီ မရငျ့သနျသေးတော့ လုပျနိုငျသလောကျလေးလုပျတာကိုက အမွတျ မဟုတျပါလား။” လို့ရေးထားပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
ပရိသတ်ကြီးရေ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်း ဇေသီဟကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံး ခရိုနီတစ်ဦး ဖြစ်ပါတ ယ်ေ နာ်။ နန္ဒာလှိုင်ကိုယ်တိုင် ကလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာလောက ကနေ ရာသက်ပန်စွန့်လွှတ် ပီးစီး ပွားရေးလောကထဲသို့ အခြေချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် နော်။ ပရိသတ်တွေကချစ်သလောက် ပရိသတ်တွေအပေါ်တန်ဖိုးမထား တာကတော့ စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဂဃဏန သိခဲ့ရပါတယ်နော်။
အစပိုင်းမှာတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး အဆဲခံခဲ့ရပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြန်လည် အားပေးလာခဲ့ကြပါ တယ်နော်။ ဇေသီဟကလည်း ပြည်သူတွေ သူ့အပေါ် အပြစ်မမြင်အောင် အတိုးနှုန်း သက် သာစွာ ပိုက်ဆံတွေချေးပြီး စည်းရုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။
ဇနီးကို ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ဇေသီဟက တစ်သက်လုံး ဘုန်းကြီးမဝတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် တင် ထား ပါတ ယ်နော်။ “ နှစ်တိုင်း ရဟန်းခံပါတယ်။ ဝိနည်းနဲ့ မနေနိုင်ပဲ ရဟန်းခံတော့ အပြစ်တွေအများကြီး ရမှာပဲ။ သေချာပါတယ် ရခဲ့ပါတယ်။ သိမ် ဆင်း ပြီး ၅ မိနစ်မပြည့်ခင်မှာထဲက ဝိနည်းအတိုင်း မဖြစ်တော့တာ သိပါတ ယ်။ဒကာမ နန္ဒာကို နှုတ်ဆက်တယ်။ တွေ့တော့ ပြုံးမိတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ စိတ်ကို ဘုန်းကြီးစိတ် အပြည့်မဖြစ်သေးဘူးလေ။ ဝိနည်းအတိုင်း မနေနိုင်ရင် ငါရဟန်းမခံသင့် ဘူး ဆို ရင် ဒီဘဝရော နော က် ဘဝတွေပါ ရဟန်းခံဖြစ်တော့မယ် မထင်ပါ။ ပါရမီဆိုတာ တစ်စွန်းတစ်စ တစ်စက်မှ ရေအိုြး ကီးကို ဖြည့်ရတာပါ။ရေစပ်ကတက် လာ တာဖြစ်ရင် ရေစိုလာမှာပဲ။ ရေမစိုမှ ကုန်းပေါ်တက်မယ် တွေးရင် စိတ်ကူးရင်သက်သက်ပါပဲ။ ကုန်းပေါ်အရင်ရောက်ပြီးမှ ရေခြောက် အောင်လုပ်ရပါမယ်။
သတိထားဖို့က ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရေထဲမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ဝိနည်းအတိုင်း မနေခဲ့ဖူးဆိုရင်တောင် အလုပ်ကြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ လမ်း ခင်းတာ ဆေးသုတ်တာ တွေ လုပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှု ရှာကြံလုပ်ခဲ့တာ အြ မတ်ပါပဲ။ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ် ချိန်ခွင်တင်ရင် ကုသိုလ်အင်အား များနေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ပါရမီ မရင့်သန်သေးတော့ လုပ်နိုင်သလော က်လေးလုပ်တာကိုက အမြတ် မဟုတ်ပါလား။” လို့ရေးထားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝကနေ ခုအသက် (၄၃)နှစ်ထိလုပ်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုေ တာင် စွန့်လွှတ်ပြီးသားမို့ BLACK LIST လုပ်လည်းဂရုမစိုက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်